မောင်ချစ်: ဆယ်ယူ၍မရရှိသော ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော်ကြီး
ဒီတလော စဉ်းစားစရာ တခုပေါ်လာတယ် ဒါကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက်ပါ အရမ်းကိုတန်းဖိုးရှိပြီး မြန်မာ့သမိုင်းကိုပါ မှတ်တန်းတင်းနိုင်မဲ့ တခုဖြစ်နေတယ် ဒါကိုလည်းတော်တော် များများ ရယူဖို့ကြိုးစားကြတယ် မရကြဘူးဖြစ်နေတယ် ၊ ထင်တာနဲ့မြင်တာကိုပြောရရင်တော့ နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ မင်းညစ်မင်းစိုးကြောင့်လား ဒါမှမဟုတ် အကျင့်တွေပျက်နေတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားကြောင့်လား ဒါမှမဟုတ် မထိုက်တန်လိုလား စဉ်းစားမရဖြစ်လာတယ်၊
မြန်မာပြည်သူအပေါင်းတို့ တစ်စိုက်တမတ် ၊ တမ်းတမ်းတတ ၊ တမတ်တမော၊ ကြာရှည်လေးမြင့်စွာ စိတ်ဝင်စားခံသောအရာ ထိုအရာသည် မြန်မာပြည်သုတို့၏ နလုံးသား နက်ရှိုင်းစွာ ၊ အသည်းခိုက်အောင် အမှတ်တရ ရှိနေပါတယ် ၊ တစ်ချို့သော်လူတွေ သိသလို မသိသေးတဲ့လူတွေလဲရှိပါတယ် ၊ဒါကတော့ ရန်ကုန်မြစ် နှင့် ငမိုးရိပ်ချောင်း အဆုံးနာတွင်ရှိသော် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ် ။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော် ကို ခရစ်နှစ် ၁၄၇၆ ဓမ္မစေတီမင်းသွန်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဝ ၁၈ တောင် ၊ အစောက် ၁၂ တောင်ရှိပြီး အလေးချိုန် ပိသာ ၁၈၀၀၀၀ ရှိပါတယ်၊ ခေါင်းလောင်းကြီးကို နိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်းစားကြပြီး ဆယ်ယူရေးအတွက် သြစတြေးလျ ၊ အမေရိကန်မှ ကုမ်ပဏီများ ၊ ဂျပန် ဟောင်ကောင် နှင့် ထိုင်ဝမ် တို့မှ ချမ်းသာသော်လူများ ၊ ဘာသာရေးအဖွဲစည်းများ ၊ ရှပ်ရှင် မီဒီယာ ၊ ရှေးဟောင်းစိတ်ဝင်းစားသူများ ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူစွန့်စားများ က ခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူရေးအတွက် တော်တော် များများ ကြိုးပန်းကြတယ် ၊ဒါပေမဲ့ ငွေတွေသာ ကုန်သွားကြတယ် ခေါင်းလောင်းကြီးကို မရကြဘူး ဒါကဘယ်အတွက်ကြောင့်လဲ ၊ စိတ်ဝင်းစားတာကတော့ ဆယ်သူတော်တော် များများ ခေါင်းလောင်းကြီးကိုတွေ့ပြီး ခေတ်မှီ စက်ကြီးတွေနဲ့ ဆယ်တယ်မရကြဘူး ၊ ဆိုးတာက ဆရာချစ်စံဝင်းရဲ့ သားပါ ဒီခေါင်းလောင်းကြီး နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုံးသွားတယ် ဒါကတော်တော် စိတ်ဝင်းစားဖို့ကောင်းတယ်၊ လူတွေပြောကြတာကတော့ ခေါင်းလောင်းကြီး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိုက်တို့ ဥစ္စာစောင့် ကစောင့်ရှောက်တယ်လိုပြောကြတယ်၊ သိုက်က မြနန်းနွယ် တဲ့ ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူတဲ့ သုတွေပြောကြတာ ကာတော့ ခေါင်းလောင်းမဆယ်ယူခင် သင်္ဘောအရင် ဆယ်ရမယ်တဲ့ ၊ ခေါင်းလောင်းကြီး ကို ငဇင်ကာ ကလက်နက်ခဲယမ်းလုပ်မယ်ဆိုပြီး သယ်ယူသွာတယ် ဒါပေမဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီးက ရန်ကုန်မြစ် မှာဘဲ ကျသွားခဲ့တယ်၊ တချို့သော်လူကြီးတွေပြောကြတာတော့ ငဇင်ကာ တို့ဟာ ခေါင်းလောင်းအပြင် ဘုရားမှာရှိတဲ့ ရတနာတွေ တော်တော် များများ ပါရှိသွားတယ် လို့သိရတယ် ၊ ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာ ခေါင်းလောင်းကြီး နဲ့အတူ ရတနာ တွေဟာ မြစ်ထဲမှာရှိနေတယ် ၊
ဓမ္မစေတီ သမိုင်းအထာက်ထားအရ .....
ငဇင်းကာသည် ဓမ္မစေတီမင်းကြီးလှူခဲ့သော ခေါင်းလောင်းကြီးကိုသန်လျင်မြို့သို့သယ်ဆောင်ရန် ရွှေတိဂုံ
စေတီတော်၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ရွှေ့ထားခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းခေါင်းလောင်းကြီးသည် အလေးချိုန် ၁၈၀၀၀၀ ပိသာရှိကြောင်း အမြင့် ၁၂ တောင် အဝအကျယ် ၁၈ တောင်ရှိသည်။
ဓမ္မစေတီမင်းကြီးသည်အမှန်တကယ်ပင် ကြေးပိသာ၁၈၀၀၀၀ရှိသော ခေါင်းလောင်းကြီးကိုသွန်းလုပ်ပြီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပေါ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်ဟူသော အချက် နှင့် ယင်းခေါင်းလောင်းကြီးကို ငဇင်းကာသည် သယ်ယူသွားခဲ့ရာ ဒေါပုံမြစ်ဝ၌ ရေတွင်းသို့ကျ၍ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်ဟူသော အချက်နှစ်ချက်မှာ ယုံမှားသံသယ မရှိနိုင်သော အချက်နှစ် ရပ်ဖြစ် လက်ခံနိုင်သော အထောက်အထားများဖြစ်ပါသည် ။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို ဆယ်ယူရပါက ကမ္ဘာ အကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းအဖြစ် နိုင်ငံတကာတွင်
ပေါ်လွင် ထင်ရှားပါမည်။ ခေါင်းလောင်းကြီးကို မြန်မာ နိုင်ငံရှိ သမိုင်းသုတေသီများ ရှေ့ဟောင်းသုတေသီ များများက တော်တော် ကြိုးစားပြီး ရှာကြပါတယ် ၊ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ရေငုတ်ပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် သို့ပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆယ်ယူလိုမရခဲ့ပါဘူး ခင်ဗျာ၊
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ကြေးသတ္တုအလေးချိန် ပိသာ ၁၈၀၀၀၀ ပေါ်မူတည်၍ ခေါင်းလောင်းအရွယ်အစားကို တွက်ချက်ခြင်း........
မသွန်းလောင်းမှီ ကြေးသတ္တုအလေးချိန် = ၁၈၀၀၀၀ ပိသာ
ကြေးသတ္တုတစ်တန်ရှိ ခန့်မန်းခြေပိသာ = ၆၀၀ ပိသာ
ကြေးသတ္တု၏ တန်ချိန် (၁၈၀၀၀၀ / ၆၀၀) = ၃၀၀ တန်
သွန်းလောင်းရာတွင် လေလွင့်ပျောက်ဆုံးမူ = ၁၅ %
အမှန်တကယ်ခေါင်းလောင်းတွင် ကျန်ရှိမည့် အလေးချိန် ( အစိတ်အပိုင်းငယ်များအပါအဝင်)
၃၀၀ * ၈၅ % = ၂၅၅ တန်
ခေါင်းလောင်းဂွချိတ် ၊ သပ် ( သို့ ) ချိတ်တန်း ၊ ခေါင်းလောင်း ၊
ခွချိတ်နှင့် တန်းအတွက် ခန့်မှန်းအလေးချိန်မှာ ခေါင်းလောင်းအလေးချိန်၏ ၁၀ % ဖြစ်၏ ၊
ကြေးသတ္တု၏ သိပ်သည်းဆ ၁ ကုပဗေ = ၅၅၆ ပေါင် ခေါင်းလောင်းအလေးချိန် ၂၂၉ . ၅ တန်၏ ဒြန်ထု (၂၂၉ . ၅ * ၂၂၄၀ ) / ၅၅၆ = ၉၄၂ .၆ ကုဗပေ
ခေါင်းလောင်းဆလင်ဒါ ထုတည် ၁၂ ပေ (အချင်း) * ၁.၅ ပေ = ၃.၁၄ * ၁၂ * ၁၂ / ၄ *၁.၅ =၁၆၉.၆ ကူဗပေ
မျက်ကွင်း၏ ခန့်မှန်းထုထည် = ရ၀ ကုဗပေ
ဆလင်ဒါ၏ ဟောင်းလောင်းပေါက်အတွင်းသား ထုထည် ၉၂၄.၆ - ၁၆၉.၅၆ - ၇၀ = ၆၈၅.၀၄ ကုဗပေ
ဆလင်ဒါကြေးသတ္တု၏ အပြည့်ထုထည် ၁၂ ပေ(အချင်း) * ၁၃.၅ ပေ = ၃.၁၄ *၁၂*၁၂ /၄ *၁၃.၅ =၁၅၂၆.၀၄ ကုဗပေ
အဓိကထုထည် = ၁၅၂၆.၀၄ - ၆၈၄.၅၄ = ၈၄၁ ကုဗပေ
အဓိကအချင်း = ၈၄၁*၄ / ၁၃.၅ *၃.၁၄ = ၈.၉ ပေ
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော်ကြီးသည် ကောဇာသက္ကရာဇ် ၈၅၂ ခုနှစ်က ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော်ပေးသို့ ဓမ္မစေတီမင်းက တင်လှူပူဇော်ခဲ့ပြီး သက္ကရာဇ် ၉၄၇ ခုနှစ် တန်ဆောင်မှန်းလပြည့်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ပေါ်တီဂီနယ်ချဲ့ ဒီဘရစ် (ခေါ်) ငဇင်ကာက မတရား ဖြုတ်ယူပြီး သင်္ဘောနှစ်စီးဖြင့် တင်ဆောင်ခဲ့ရာ ရန်ကုန် နှင့် သံလျင်မြို့ကြား ပဲခူးမြစ် ရန်ကုန်မြစ် နှင့် ပုဇွန်တောင်ချောင်းဝဟူသော မြစ်သုံးဆိုင်အေ၇ာက် တွင် ၄င်းသင်္ဘော နှစ်စီးတိမ်းမှောက်ကာ ခေါင်းလောင်းကြီးလည်း နစ်မြုပ်ခဲ့ သဖြင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော်ကြီး ရေအောက်စံပျော်သက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၄၂၆ ခုနှစ် တိတိရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
ရေးသူ မောင်ချစ် အချိုန် 08:45